Abakhiqizi nabahlinzeki be-Magnetic Shuttering System - China Factory Magnetic Shuttering System Factory
I-Corner Magnet Yokuxhuma Amasistimu Okuvala Magnetic noma Izikhunta Zensimbi
Ama-Corner Magnets asetshenziselwa ngokuphelele ukwakheka kwensimbi okubunjiwe okwe- "L" noma amaphrofayli amabili okushutha kazibuthe ekujikeni. Ama-feets angeziwe angakhethwa ukuqinisa ukubopha phakathi kwe-corner magnt kanye nesikhunta sensimbi.
I-Steel Lever Bar Yokukhulula Ama-Push / Pull Button Magnets
ISimbi Lever Bar iyisesekeli esifane sokukhipha odonsa benkinobho yokudonsa / yokudonsa lapho udinga ukuyihambisa. Kukhiqizwa ngebanga eliphakeme leshubhu nensimbi yensimbi ngenqubo egxiviziwe neyokushisela.
I-350KG, i-900KG Isinkwa Magnet se-Precast Steel Rails noma i-Plywood Shuttering
Isinkwa Magnet luhlobo olulodwa lukazibuthe oluvalelayo olunesimo sesinkwa. Isetshenziselwa ukufanela isikhunta sesitimela sensimbi noma i-plywood shuttering. I-adaptha yendawo yonke yokwengeza ingasekela odonsa besinkwa ukuxhuma isikhunta eseceleni ngokuqinile. Kulula ukususa ozibuthe babe sesikhundleni ngethuluzi elikhethekile lokukhishwa.
Uhlobo lwe-1T Type Magnet Shuttering Magnet nge-2 Notches
1T thayipha insimbi engagqwali igobolondo lokuvala uzibuthe ngosayizi ojwayelekile wokukhiqizwa kwezakhi zesangweji ezikhanyayo ze-pc. Ilungele ukuphakama kwesikhunta sohlangothi olungu-60-120mm. Indlu engaphandle lensimbi engagqwali engu-201 nenkinobho ingamelana nokugqwala kukakhonkolo.
0,9m Length Magnetic Side Rail with 2pcs Integrated 1800KG Magnetic System
Lolu hlelo lojantshi ohlangothini lukazibuthe wobude obungu-0.9m, luqukethe iphrofayli yensimbi ene-2pcs edidiyelwe ye-1800KG yokuphoqa amandla kazibuthe, angasetshenziswa ekwakhiweni kwamafomu ahlukile. Isikhungo senzelwe imbobo ngokukhethekile ukukhiqizwa kwamarobhothi okwenziwe ngezindonga eziphindwe kabili.